Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀: Philadelphia တွင်ရာသီ ၁၁ တွင်အမြဲတမ်းနေသာသည် - တီဗီ
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ - Philadelphia တွင်ရာသီ ၁၁ တွင်အမြဲနေသာသည်
netflix အပေါ်သစ်ကို Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒ
ဒါဟာ Philadelphia တွင်ရာသီ 11 တွင်အမြဲနေသာ Netflix အပေါ်ယခုဖြစ်ပါတယ် Netflix မှအကောင်းဆုံးဟာသတီဗီ - ၄၀ Philadelphia တွင်ရာသီ ၁၁ တွင်နေသာသည်
Philadelphia တွင်အမြဲတမ်းနေသာနေပြီး Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ဒါဟာ Always Sunny ရာသီ 11 ထွက်ရှိပြီးနောက်အောက်ပါအဆင့်တွင်စီးရီးကိုတက်နေကြသည်။
ဒါဟာ Philadelphia တွင်အမြဲတမ်းနေသာပါပဲ Season 11 ကိုဇန်နဝါရီ ၃ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် Netflix တွင်စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ စီးရီးသည် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်၏ငါတို့၏တီဗီရှိုးဖြစ်ပါတယ်!
Netflix တွင်ယခုရာသီသစ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ၏အဆင့်တွင်စုံတွဲတစ်တွဲကိုပါစီးရီးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနေသည်။
စီးရီး၏ ၁၂ ရာသီသည်ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် FXX တွင်ပြသမည်ဖြစ်ရာယခုရာသီသည် ၁၁ နာရီကိုကြည့်ပြီးဇာတ်လမ်းအသစ်များမထွက်မှီစီးရီးနှင့်အမီလိုက်ရန်ဖြစ်သည်!
သငျသညျမမွငျခဲ့လျှင် အမြဲတမ်းနေသာသည် သငျသညျပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းနှင့်အဖြစ်မကြာမီတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပျက်စေရန်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်! ကျနော်တို့ကအလုံအလောက်အကြံပြုလို့မရပါဘူး
စီးရီးများကို Rob McElhenney နှင့် Glenn Howerton မှဖန်တီးခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည်။ McElhenney နှင့် Howeron တို့သည် Danny DeVito, Charlie Day နှင့် Kaitlin Olson တို့နှင့်အတူစီးရီးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Howerton, Day နှင့် McElhenney တို့သည်ပြပွဲ၏ ၁ အများစုကိုရေးသားခြင်းအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်
Philadelphia တွင်, သူငယ်ချင်းငါးယောက်၏အုပ်စုတစ်စု, Set, စပါးရဲ့အရက်ဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ crappy ဘားပိုင်ဆိုင်နှင့်၎င်းတို့၏ရယ်စရာနှင့်မိုက်မဲသောအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူဒုက္ခရ။
အချိန်ကာလ ၁၁ ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက် Netflix မှာရှိတဲ့အခြားပြပွဲတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်သင့်တယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပြပွဲများကိုရှာရန် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။
gotham ရာသီ3ထွက်လာပါဘူး
ဒါဟာ Philadelphia တွင်အမြဲတမ်းနေသာပါပဲ Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗီဟာသ ၅၀ တွင်လည်းပါဝင်သည်။ သင်စောင့်နေစဉ်အဆင့်ကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည် ဒါဟာအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ streaming ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ရာသီ 12 ဖြန့်ချိခံရဖို့။
Lana ကွန်ဒိုနှင့် Noah centineo ချိန်းတွေ့
ပိုကောင်းခေါ်ဆိုပါ saul ရာသီ4အပိုင်း4စောင့်ကြည့်အွန်လိုင်းအခမဲ့
အခါအမည်ပျက်စာရင်း၏ရာသီ4ဖြစ်ပါတယ်
တပါးအမျိုးသားအမှုအရာရာသီ4ရှိဂုဏ်နပါသလဲ
အမြဲတမ်းနေသာရာသီ ၁၁ ရက်လွှတ်ပေးပါ